Kormeere: Ficil baa loo baahan yahay | Updates
[ficil baa loo baahan yahay] Dalbo Gaadiid-bas (9-12); Isu diiwaangeli hadaad rabto Academiyada waxbarashada durugsan(K-12)
Waalidiinta/Masuuliyiinta Qaaliga ah,
Waxaan ka codsanaynaa waalidiinta waqtigan macluumaad la xiriira baahida gaadiidka (basaska) ardayda dugsiga sare iyo rabitaanka qoyska ee 100% waxbarasho durugsan (guri) oo gooni ah oo ikhtiyaari ah. Jawaabahaagu waxay ka caawinayaan iskuulada inay qorsheeyaan gaadiid-bas iyo doorasho cusub oo sannadka-dhan waxabarsho durugsan (guri).
Codso Gaadiidka (fasalada 9-12 keliya) ugu dambayn Agosto 9
Marka la eego duruufaha aan caadiga ahayn ee sanadkan, waxaan ka codsanaynaa waalidiinta/masuuliyiinta inay sheegaan haddii ardaydooda fasalada 9-12 ku talo jiraan inay raacaan baska iyo inkale (hadday xaq u leeyihiin) sannad-dugsiyeedka 2020-2021. (Haddaanad hubin in ardaygaagu bas xaq u leeyahay halkan ka hubi here.). Ujeedada codsigani waa in la hubiyo in tirada basku qaadayo aanay ka hor-imanayn tilmaamaha waaxda caafimaadka Minnesota (MDH) iyo ta waaxda waxbarashada (MDE).
Fadlan ogow: Haddii ilmaago leeyahay gaadiid kaasoo qayb ka ah qorshaha waxbarashada gaarka ah (IEP), gaadiidkii qaadi lahaa mar horaa loo diyaariyey umana baahnid inaad codsato.
Fadlan soo dhamaystir foomkan hoose ugu dambayn 9:00 fiidkii, Axadda, Agosto 9, 2020. Jawaabtaadu muhiim bay u tahay qorsheheena meelaynta basaska.
*Ogow: Haddii baahida gaadiid ee ilmahaagu isbedesho inta iskuulku socdo ama aad qabto su’aalo, fadlan nagala soo xiriir busquestions@district279.org ama 763-391-7244. Fadlan sug hal todobaad in isbedelku dhaco.
Isu diiwaangeli Academiyada waxbarashada durugsan ee ikhtiyaariga ah (Fasalada. K-12) ugu dambayn Agosto 12
Qoysaska doorta 100% habka waxbarasho durugsan ama guri ee ardayda ku jira K-12 waxay iska diiwaangelin karaan Akademiyada cusub ee waxbarashada durugsan ee degmada. Habkan wuxuu u furan yahay dhammaan qoysaska ardayda k-12, kamana mid aha saddexda nidaam ee degmadu hirgelin doonto (qof ahaan, isku-jir ama waxbarasho durugsan). Waa fahansan nahay caqabadaha caabuqa COVID-19-ku ku keenay ardayda iyo qoysaskooda, Akadeemiyadeena waxbarashada durugsan waxay siin doontaa badal kale oo qiimo leh ciddii doorata inayna iskuulada qof ahaan u tegin.
Iyadoo la raacayo tilmaamaha waaxda waxbarashada Minnesota (MDE), barnaamijkani wuxuu siinayaa ardayda barashada dhammaan heerarkii loo baahnaa ee gobolka, adeegyadii Barashada ingiriisiga (EL), iyo adeegyadii waxbarashada gaarka ah.
● Ardayda dugsiga hoose waxay helayaan fursado waxabarsho oo la mida kuwa dhigooda, laakiin waxaa loo soo marinayaa kombiyuutarka.
● Koorsooyinka lagu bixinayo dugsiga sare waxay diirada saarayaan maadooyinka asaasiga ah iyo shuruudaha qalinjebinta. Maadooyinka xulashada iyana waa la bixin doonaa, laakiin waa xadidan yihiin ooy ugu wacan tahay agabyada la heli karo ee lagu fulinayo maadooyinkaas.
Ardayda waxaa lagu qori doonaa macalin shati haysta oo shaqada u go’ay si uu u bixiyo waxbarashada iyo cawinta iskudhaf ah siina marinaya kulamo toos ah (Live) oo kombuutarka ah, casharo fidiyo ah, iyo shaqo qof-qof ah. Ardayda fasalada k-5 waxay dhamaystiri doonaan casharada iyo isticmaalaya habka seesaw kuwa fasalada 6-12 waxay casharada ku samayn Schoology-ga. Ardaydu waxay isticmaali doonaan barnaamijka aalada kombutarka oo iskuulada Osseo leeyihiin. Arday walba waxaa la siin doonaa qalab u gaara oo waxbarasho si ay wax ugu bartaan, iyo caawin internet oo qoysaska.
Si aad wax badan uga ogaato Akadeemiyada waxbarashada durugsan, fadlan booqo boggeena Distance Learning Academy website.
Qoysaska raba inay isu diiwaangeliyaan Akadeemiyada waxbarashada durugsan waa inay dhamaystiraan foomka diiwaangelinta hoose ugu dambayn 9:00 fiidnimo ee Arbacada, Agosto 12keeda, 2020. Si aad isugu diiwaangeliso habkan, ardaydu marka hore waa inay ka qoran yihiin Iskuulada Nawaaxiga Osseo. Fadlan la xiriir xarunta isqoridda 763-585-7350 haddii aan ardaygaagu ka qornayn degmada.
Isqorista Akadeemiyada waxbarashada durugsan waa go’aan qaadasho sannadkoo dhan ah. Codsiyada ka bixidda Akadeemiyada waxbarashada durugsan oo lagu noqdo iskuulkaagii hore inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka lama damaanadqaadayo. Codsiyada bedelaada waxaa la eegi doonaa ka hor trimesterka 2 iyo 3, in meel laguu helaana waxay ku xiran tahay helitaanka macalimiin shati leh iyo gaadiid.
Haddaad u baahan tahay caawimo dhamaystirka foomka Akadeemiyada waxbarashada durugsanm, fadlan fariin ku dhaaf 763-391-7000. Qoysaska isu diiwaangeliyey Akadeemiyada waxbarashada durugsan waxay heli doonaan macluumaad dheeri ah kadib Agosto 9keeda.
Waxaan sugnaaba waa inaan ku soo dhoweyno ardaygaaga sannad-dugsiyeedka cusub!